Mkpọmkpiri: Ụdị Mgbagwoju Ndị Ngwá Agha na Otu E Si Eji Aka Weebụ
Ị nweta ihe mgbaru ọsọ SEO ezubere iche iche nwere ike imebi ihe dị iche iche, ebe nrụọrụ weebụ gịnchebe bụ otu n'ime ha. Mmetụta na nsogbu ndị a na-enweta na teknụzụ akụrụngwa chọrọ ọkwa dị elu nke usoro nchedo.Ọnụ ọgụgụ na-egosi na ihe karịrị pasent 10 nke ebe nrụọrụ weebụ na-agbada n'ihi ndị omempụ na ọgụ - waring pro mg100a.
Ịbụ ihe nchịkọta ọdịnaya, nchedo weebụ gị nwere ọtụtụ ihe. Onye ọrụ aka ọrụna SEO zuru ezu iji nweta nchekwa weebụ gị na-arụ ọrụ nke ukwuu maka ụlọ ọrụ dị mma na-arụ ọrụ n'ịntanetị. Na-arụ ọrụ na SEOndị ahịa na-emesi ndị ahịa ike nchebe, na-agbadata ndị kasị asọmpi, na ọgbọ nke backlinks na oge. N'ikpeazụ, ọdịnayandị ahịa na-enwe mmasị n'ịhụ ihe mgbaru ọsọ ha na izute nnukwu nloghachi.
Nik Chaykovskiy, Onye Ọrụ Ndị Nlekọta Ndị Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ Gbasara Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, kọwakwuru na ị na-arụ ọrụ na cyber-ọgụ.
Mwakpo agha agha
A na-ezo aka na ya dịka ikpo agha nke ikpu, oké agha agha na-eji ndị na-ere ihe n'oge aimebi usoro kọmputa gị. Ụdị ọgụ a na-emetụta ọnọdụ ụfọdụ. Ndị na-eme ihe ike na-eji ụzọ agha ikpo isi nweta ohere ịnweta ebe nrụọrụ weebụ gịnkọwa na-eji usoro niile dị na ụwa. Mgbe ịnweta PC gị, ndị omempụ nwere ike ịnweta akaụntụ gị na okwuntughe gịna-agagharị ma na-eleba anya n'ịtụkwasị obi. Otú ọ dị, ọ dị mfe ịchọta ịwakpo agha dị egwu ka usoro kọmputa na-egbu ọtụtụihe omuma ihe n'otu oge.
Mwakpo ike ịlụ ọgụ dị mfe ịchọta. Ịbụ nzọụkwụ n'ihu hackers na-akwụ ọtụtụ.Iji gbochie ịbụ ndị a kpochapụrụ site na iji mbuso agha ndị isi, ị nwere ike ịkwụsị log na mgbalị, ma mechikwaa akụkọ ahụ ma ọ bụrụ na ị na-anwale mgbalị.
Mwakpo mmadụ na-etiti
Mkparịta ụka n'etiti onye njedebe njedebe na ebe nrụọrụ weebụ na ihe ndị na-eme nke ọma na MITM ọgụ. Ndị na-eme ihe nchịkwa na-achịkwa ebe nchekwa weebụ gị site na intercepting nkwurịta okwu forums. Na usoro mgbochi a, ndị na-agba ọsọ na-achịkwaihe niile na-enweghị njedebe njirimara njirimara.
MITM ọgụ mgbochi mgbochi
Iji gbochie ndị agha ịghara ịchịkwa nchekwa weebụ gị, tụlee ijifirewalls, website gateways, anti-virus programs, na VPNs. Iji nkesa zoro ezo n'etiti onye nkesa na onye ahịa na-enyere aka igbochi ndị omere.
Ihe a na-akpọkarị injinịa mmadụ, a na-ewere mmekọrịta mmadụ na ya dị ka ihe kachasị mfeụzọ mbanye anataghị ikike a guzosiri ike ike. Ndị na-agba ọsọ na-eji usoro a eme ihe iji mee ka ndị ọrụ gosipụta okwuntughe ha na nkọwa kaadị akwụmụgwọ ha.
Ndị na-agba ọsọ nwere ụzọ ha si echekwa elu ha dị elu site n'ime ka mmekọrịta dị mmana ha. A pụghị igbochi ịlụ agha mmepụta ihe site n'ịghọta ndị mmadụ na ọ dị ha mkpa idebe ozi ha dị mwute.
Mwakpo agha nke ndị ahịa
N'ịdị ọgụ a, ndị na-agba ọsọ na-emebi nchedo weebụ gị site na iji akaị pịa akwụkwọ na-emeghe ma pịa. Site na ime otú ahụ, hackers na-eduga gị na obi website na renders ị na-adịghị ike ga-hacked.
Ịmepụta ndị ọrụ gị na mkpa ọ dị ịkpachara anya mgbe ị na-eji yaỊntanetị dị mkpa. Ndị na-agba ọsọ na-amụ anya site na ichere onye ọrụ iji budata ngwanrọ n'efu site na saịtị ọjọọ, mgbe ahụ mbanye anataghị ikikenzukọ dum. Kpachara anya ma kpachara anya mgbe ị na-eji WIFI ọha na eze ghara izere.
A na-ejikarị agha ahụ eme ihe iji gbasaa nje virus, nwee ike ịnweta ihuenyoozi, ma mepụta crackdown maka PC.
Nọgide na-amụ anya
Ịbụ nche site na igbochi niile ọma nke gị na saịtị ahụ ga-echebe gịhackers. Tụlee iji mejuputa ma nchedo IT na ime obodo na-achọ ka ọ dịrị mma.
Nchedo weebụ gị na-emetụta ihe dị ukwuu ma a bịa n'ịzụ ahịa dijitalụ na azụmahịa.Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke saịtị azụmahịa na-agbada kwa ọnwa n'ihi ọgụ site n'aka ndị omempụ ọjọọ. Hụ ndị ọkachamara IT n'ọrụ iji chebe gị nagbochie saịtị gị site na ịga ala n'ihi hacking.